Xukuumadda Jabuuti oo diyaarisay 450 ciidamo ah oo ka qeybgala dagaalka ka dhanka ah Islaamiyiinta Somaliya. | Halganka Online
Xukuumadda Jabuuti oo diyaarisay 450 ciidamo ah oo ka qeybgala dagaalka ka dhanka ah Islaamiyiinta Somaliya.
Posted on Janaayo 29, 2010 by halganka
Wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Jabuuti Max’uud Cali Yuusuf aya maanta gelinkii danbe sheegay dalkiisu in uu diyaariyay 450 ciidamo ah oo ka qeyb qaadanaya gulufka beesha Caalamka ugu jirto badbaadinta xukuumadda taagta daran ee Shariif Sh Axmed iyo ka hortagidda dalka in ay qabsadaan Islaamiyiinta oo lagu soo rogo shareecada Islaamka.
Max’uud Cali oo wareysi gaar ah siiyay Wakaaladda wararka Reuters xilli uu ka qeybgalayay shir ay leeyihiin wasiirada arrimaha dibadda dalalka Midowga Afrika ayaa xusay in dalkiisu ay ka qeybqaadanayaan waxa uu ugu yeeray nabad ilaalinta Somaliya, isagoona carabaabay in rajo uu ka qabo dowrkooda oo kale in dalal kale ay qaataan.
Waxa uu ku andacooday in dalka Somaliya daris ay yihiin oo xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo sidaasi darteedna ay haboon tahay Afrikaanimo in ay u saacidaan oo ay wax kaga qabtaan.
Beesha Caalamka oo isku duuban ayaa ka baqanaya in Somaliya ay qabsadaan Islaamiyiinta isla markaana ay baahiyaan ku dhaqanka Shareecada Islaamka, arrinkaasi ayaana ah midka ay sida aadka ah u diidan yihiin dawladaha Caalamka iyo kuwa gobolka.
Xarakada Mujaahidinta Al-Shabaab ayaa hore digniin ugu jeedisay dalkaasi Jabuuti iyagoona u sheegay shacabka dalkaasi in ay walaaltinimada ilaaiyaan oo aaney caruurtooda kusoo jiidin halaag ay lugahooda kala carareen Tigreeda.
« Cali Dhallaaye oo iska casilay xilkii Madaxa Sirdoonka gobolka Sool, dalbadayna in shacabnimo lagu qadariyo oo aan la dhibaateyn. Guutooyinka Shabaabul Mujaahidin oo xalay saqdii dhexe dagaal qorsheysan ku ekeeyay dhamaan xarumaha Maleeshiyada DKMG iyo kuwa AMISOM( Warsaxaafadeed). »